Идеи и съвети за беседка и барбекю на около 25 кв.м. | Art senses – идеи за дома и градината
25 sq.m. အကြောင်း Arbor နှင့် BBQ အကြံဥာဏ်များနှင့်အကြံပြုချက်များ
10.03.2019 Posted by: အနုပညာ Senses
Arbore, အပြင်ဘက်ထောင့်, ဥယျာဉ်တော်, မူလစာမျက်နှာ, သိကောင်းစရာများ
ပတ် ၀ န်းကျင် 25 စတုရန်းမီတာရှိသောကျောက်တံတားနှင့်အသားကင်becရိယာတည်ဆောက်ခြင်းအတွက်လက်ရှိအကြံဥာဏ်များနှင့်အကြံပြုချက်များနှင့်အတူ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုကဲ့သို့သောစီမံကိန်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက်လက်တွေ့ကျသောလမ်းညွှန်ချက်များကိုပေးမည်။ တကယ်တော့ထိုကဲ့သို့သောပြင်ပအစည်းအဝေးနှင့်ထမင်းစားခန်းtheရိယာ၏ဆောက်လုပ်ရေး, ကအကောင်အထည်ဖော်ရန်အလွန်လွယ်ကူပုံရသည်ပေမယ့်, မည်သည့်ဆောက်လုပ်ရေးကဲ့သို့၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အသေးစိတ်နှင့်အသေးစိတ်ရှိပါတယ်။ ဤသည်ကိုလည်းထိုကဲ့သို့သောသွန်းဆောက်လုပ်ရေးစာရွက်စာတမ်းများအချို့သောအစုကိုလိုအပ်ရတဲ့အကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။
အရည်အချင်းပြည့်မှီသောကျွမ်းကျင်သူဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်လိုအပ်သည့်သက်သက်သာသာနှင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအပြင်အစောပိုင်းအဆင့်တွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းသောအခြားအသေးစိတ်အချက်အလက်များစွာလည်းရှိသည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့၊ ကျနော်တို့တည်ဆောက်ရန်ရည်ရွယ်ထားသည့်အခါ ခြံထဲမှာရှိတဲ့ကျောက်တုံးတစ်ခု၊ အိမ်ပြင်တွင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အချက်အချာကျသောအချိန်များကိုခံစားခံစားခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်၏နေရာသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ လေကြောင်းစီးကြောင်း၏ ဦး တည်ချက်ထိပ်တန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဂန္ထဝင်ကိစ္စတွင်မြောက်ဘက်ခြမ်းသည်လေထန်ဆုံးဖြစ်သော်လည်းယင်းသည်အမြဲတမ်းမဟုတ်ချေ။ မြေပြင်အနေအထား၏တိကျမှုသည်မြေမျက်နှာအနေအထားတစ်ခုစီကိုကွဲပြားစေသည်။ ထို့ကြောင့်နေရာတစ်ခုနှင့်တိကျသောလများအတွင်းလေတိုက်ရာလမ်းကြောင်းကိုလေ့လာခြင်းများလိုအပ်သည်။ အေးခဲသောနေ့ရက်များတွင်လူအများစုသည်စားဆင်ယင်ကိုအသုံးပြုကြလိမ့်မည်။ သို့ဖြစ်ရာလေတိုက်နှုန်းအများစုနှင့်နွေးထွေးသောအခြားနေရာများရှိ ဦး တည်ချက်တစ်ခုသည်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤအပြင်ဘက်ဥယျာဉ်areaရိယာအား၎င်း၏နံရံများမှကာကွယ်ထားသောနှစ်ဖက်ကပိုမိုအားကောင်းသောရေစီးကြောင်းများကိုတားဆီးနိုင်သည့်အတွက်ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာရှိစေပြီးမမျှော်လင့်သောအအေးမိခြင်းအန္တရာယ်ကိုလျော့နည်းစေသည်။
ချက်ပြုတ်မည့်နေရာနှင့်စားသုံးမှုနှင့်ဖျော်ဖြေမှုအတွက်နေရာကိုဆုံးဖြတ်ပါ။ ကြေးစားဆောက်လုပ်ခြင်းအတွက်အခြေခံပစ္စည်းသည်သစ်သားဖြစ်သည်၊ ဒီstoneရိယာဒီကျောက်သို့မဟုတ်အုတ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ထင်းပိုကြီးလေ၊ ပို၍ သိသာလေဖြစ်လိမ့်မည် ကျောက်တုံးအပိုင်း။ ဟုတ်ပါတယ်၊ တစ်ခုမဆောက်နိုင်ပေမယ့်သယ်ဆောင်ရမဲ့ကျောက်မီးသွေး၊ လျှပ်စစ်၊ အမျိုးအစား၊ အရွယ်အစား၊ တည်နေရာ၊ စားပွဲပြင်ဆင်ခြင်းအတွက်ရွေးချယ်စရာများနှင့်၎င်းပတ်လည်ရှိတည်နေရာများကိုစဉ်းစားပါ။ လူရှစ်ယောက်ကိုကုလားထိုင်ခြောက်ခုတွင်စုရုံးရန်မဖြစ်နိုင်ပါ၊ စုစုပေါင်းအရှည်ကုလားထိုင်ခြောက်ခု၏စုစုပေါင်းညီမျှသောခုံတန်းရှည်နှစ်ခု၌လည်းဖြစ်နိုင်သည်။
Близостта до дома и специално до кухнята, ако не предвиждате създаване на ВиК връзки е много важна. Все пак не е удобно да се заобиколи цялата къща, за да се измиете или вземете една подправка или продукт. Същото важи и за електричеството и респективно за осветлението. Казано с няколко думи – колкото повече възможни детайли премислите преди началото, толкова по-успешен ще е финалът.
ရင်းမြစ် - dom.pl
အရက်, Arbore, ဥယျာဉ်တော်၌ gazebo, ခြံထဲမှာ gazebo, အစာမစား, မီးဖိုနှင့်အတူမီးဖို, arbor ဒီဇိုင်း, gazebo အတွက်စိတ်ကူးများ, တစ် ဦး gazebo အပေါ်စီမံကိန်း, gazebo အကြံပေးချက်များ, အိမ်မှာစိတ်ကူးများ, အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း, ပရိဘောဂ, အတွင်းပိုင်းစိတ်ကူးများ, ဒီဇိုင်းစိတ်ကူးများ, ခေတ်သစ်အိမ်, အလှဆင်အတွေးအခေါ်များ, အနုပညာစိတ်ကူးများ
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဓာတ်ငွေ့ပုလင်း BBQ လုပ်ပါ
ဥယျာဉ်တော်၌ gazebo, ကင်နှင့်ပြင်ပforရိယာများအတွက်စိတ်ကူးများ။ သင့်မှာခြံဝင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်လုံလောက်မယ်ဆိုရင် ...
gable ခေါင်မိုးနှင့်မီးဖိုနှင့်အတူကျောက်နှင့်သစ်သား gazebo
ကျောက်တုံးများနှင့်သစ်သားများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော gabled ခေါင်မိုးအတွက်ဤအကြံဥာဏ်များဖြင့် ...
ကျောက်အုတ်မြစ်နှင့်အတူ gazebo များအတွက်စိတ်ကူး
လက်ရှိ gazebo အတွေးအခေါ်သည်ကျောက်တုံးများနှင့်တစိတ်တပိုင်းအားဖြင့်နံရံများဖြင့်ပိတ်ထားသောအဆောက်အအုံတစ်ခုအတွက်ဖြစ်သည်။